Archives Archives - Zon'olombelona & Light Art avy amin'ny Fondation PixelHELPER
Sakafo fanomezana ho an'ny ankizy 333
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 24. Desambra 2014
Nandritra ny Krismasy dia nizara kitapo mpanampy izahay tao amin'ny tranon-jaza Marrakech. Ity hetsika Krismasy ity dia amin'ny fomban-drazana ny fizarana zokiny amin'ny Krismasy izay nahatonga ilay mpanorina ny PixelHELPER avy amin'i Attac nahazo ny loka "Manomboka ny revolisiona manokana".
Sakafo fanomezana ho an'ny ankizy 333 Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
3D famokarana herin'ny fampiroboroboana
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 14. Novambra 2014
Nanomboka nanonta ny Robohand tamin'ny pirinty Ultimaker 3D izahay. Nandritra ny fotoana dia nahazo traikefa izahay ary nanova ny famokarana ho an'i Espaina tao amin'ny orinasa fanontam-pirinty matihanina, izay manome anay tanana nivory rehefa avy nandinika ny ankizy sy ny olon-dehibe izahay.
3D famokarana herin'ny fampiroboroboana Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
Land Rover Defender manavao
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 24. Oktobra 2014
Fiovan'ny Defender Landrover ho any amin'ny faritra misy loza.
Land Rover Defender manavao Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
Fivoaran'ny Global Entrepreneurship Marrakesh
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 21. Oktobra 2014
Fivorian'ny Global Entrepreneurship Marrakesh 2014. Ny mpitarika ao amin'ny Maraokana dia afaka nanapa-kevitra momba ny tetikasa ho an'ny PixelHELPER ho solontena ary hitarika fifanakalozan-kevitra ao ambadiky ny sehatra momba ny fiaraha-miasa bebe kokoa. Koa satria mpiara-miombon'antoka ao amin'ny GES 2014 ny tranon'ny White House, dia nifanena tamin'ny Filoha Lefitra Amerikana Biden mihitsy aza izahay tao amin'ny Antenimieran'ny delegasiona.
Fivoaran'ny Global Entrepreneurship Marrakesh Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 15. Oktobra 2014
Vonjeo ny Kongresy Manerantany, Bonn. Ny Theatre Bonn nikarakara kanto-siansa kongresy amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Beethoven Festival, ny Raharaham-bahiny sy ny isan-karazany Biraon'ny Firenena Mikambana sy ireo fikambanana tsy miankina any Bonn vatana. Eo ambanin'ny lohateny "hamonjy izao tontolo izao - Ny mitsingevana iraka amin'ny manam-pahaizana, mpanakanto ary mpahay siansa" tokony alaina avy amin'ny fivoriambe foibe, efitrano malalaka sy ny laboratoara ary nanao vavahadin traikefa an-tsehatra ho midadasika kokoa bahoaka ny eran-olana ny maha-olona sy ny toe-javatra. Pixel Mpanampy nanana ny vaovao hijoro eo an-toerana ary manana ny mpanatrika manome fahatsapana voalohany ny teboka Mpanampy tetikasa.
Save the World Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
PixelHELPER Cubik ao amin'ny ONU
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 7. Oktobra 2014
Cubik any amin'ny Firenena Mikambana. Ny Magic Cube, nividy an'i PixelHELPER sy nandehandeha tany amin'ny firenena 40 manerana izao tontolo izao, dia natolotr'i Nuseir Yassin tany amin'ny Firenena Mikambana ary avy eo nalefa tany Maraoka.
PixelHELPER Cubik ao amin'ny ONU Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
Fizarana famaranana ny sekoly
Miverina any an-tsekoly any Maraoka. Distribution ny fitaovana am-pianarana akaikin'ny sekoly - Ny Mpanampy Pixel avatars, avy amin'ny Asongadina Stream tao Marrakech ireo mandrakariva eo amin'ny fifandraisana mivantana miaraka amin'ny ankizy ny avy tamin'ny vohitry isika manome akaikin'i Marrakech. Nanomana betsaka ny fanombohana ny sekoly izahay.
Fizarana famaranana ny sekoly Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 30. Aogositra 2014
Final Round Maroc Social Creative Startup Cup, 2. Place. Mazava ho azy fa tsy mandefa ekipa alemà ho any Copenhague i Maraoka noho ny fandaharana farany amin'ny "Business Business Cup". Izany no antony tsy maintsy nametrahana ny 2. Nanaitra ny foto-kevitr'ireo mpizarazara tamin'ny fiainana an-tsarimihetsika ny mpitsara.
Maroc Social Creative Startup Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
Fizarana kilalao sy boky fampiharana
Fizarana kilalao & fampiasana boky ao amin'ny Tendrombohitra Atlas akaikin'i Marrakech. Niaraka tamin'ny Foundation Abury izay miasa tany izahay dia nizara kilalao ary nanaisotra ny fako tao.
Fizarana kilalao sy boky fampiharana Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
Fanampiana fanampiana ho an'i Marrakech
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 17. Aogositra 2014
Famaranana vokatra vitsivitsy fanampiny any amin'ireo tendrombohitr'i Marrakech. Mamoaka ny fiaranay matetika izahay ary mizara fanampiana fanampiny ao amin'ireo tanàna manodidina an'i Marrakech.
Fanampiana fanampiana ho an'i Marrakech Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
Lisitry ny pixelHELPER Gamescom
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 13. Aogositra 2014
Gamescom 2014 - tranonay PixelHELPER
Lisitry ny pixelHELPER Gamescom Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
Gamescom Trailer any Palmeraie Marrakech
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 12. Aogositra 2014
Saripika trailercom ao amin'ny Palmeraie any Marrakech. Niaraka tamin'ny mpamokatra fanta-daza Youness Mouthadi izahay dia namokatra ny Trailor ho an'ny ara-barotra voalohany. Mba hanamafisanao ny foto-kevitra futuristic an'ny PixelHELPER, dia nampifanaraka ny vokatr'ilay sarimihetsika Stargate izahay.
Gamescom Trailer any Palmeraie Marrakech Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 11. Aogositra 2014
Fandaharam-pandefasana horonan-tsarimihetsika amin'ny alàlan'ny fampielezam-peo mahantra amin'ny Ustream
Vetivety izahay dia nahatsikaritra fa amin'ny mari-pahaizana mihoatra ny 40, mila mividy ny fitaovana. Eto dia ahitanao ny takelaka fidirana WLAN amin'ny finday miaraka amin'ny batterie fialana.
Fandaharam-pandefasana videô Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 8. Aogositra 2014
Fanomezana fanomezan-dàlana hamaritana vokatra fanampiny ao Maraoka hatramin'ny taona 3013. Azo antoka fa typo fotsiny izany, fa farafaharatsiny tsy voatery manontany isaky ny volana vitsivitsy izao.
Fankatoavana iraisana Jolay 15th, 2016Oliver Bienkowski
18. Jolay 2014
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 18. Jolay 2014
Resadresaka momba ny tetikasa PixelHELPER ao #Marrakech. Mpandray anjara dr. Mohamed Kalakhi avy amin'ny ambasadin'ny fanjakan'i #Marocco ao #Berlin
18. Jolay 2014 Oktobra 7th, 2015Oliver Bienkowski
06. Jolay 2014
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 6. Jolay 2014
Fandefasana voalohany amin'ny tranon'ireo Marrakech. Manana lanjany lehibe amin'ny fanatsarana ny tontolo manodidina antsika isika. Noho izany dia nanomboka ny fifanakalozana ny palmiera ho an'ny vavahady vy ary nahazo harato ho an'ireo tanora mpilalao baolina kitra.
06. Jolay 2014 Oktobra 7th, 2015Oliver Bienkowski
02. Jolay 2014
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 2. Jolay 2014
Fanombohana ny tetikasa; Fitsapana voalohany momba ny teknolojia. Voalohany indrindra, tsy maintsy lazaintsika fa tena ratsy tokoa ny haavon'ny aterineto tamin'ny voalohany. Tsy maintsy niova be izahay ary nifanaraka tamin'i Afrika. Tamin'ny farany dia niasa tsara izy ary afaka nampidirinay daholo ireo karazan-javatra nomaninay.
02. Jolay 2014 Oktobra 7th, 2015Oliver Bienkowski
Mivezivezy any Marrakech miaraka amin'ny ekipa PixelHELPER. Tamin'ny fiafaran'ny sidina dia afaka naka sary teo amin'ny fiaramanidina alohan'ny handehanana tany Medina ao Marrakech ary nifanatrika tamin'ireo fahasamihafana ara-kolontsaina tany Eorôpa.
30 Enga anie 2014
01. Mey - 30. May 2014
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 30. May 2014
Alohan'ny fametrahana ny AlphaTest Hardware ho an'i Afrika ao Düsseldorf; Fampiasana ordinatera Rasberry Pi miaraka amin'ny kamiao kely sy solonanaram-pilaminana sy banky masoandro.
01. Mey - 30. May 2014 Oktobra 7th, 2015Oliver Bienkowski
04. Aprily - 30. April 2014
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 30. Aprily 2014
Fiovàn'ny drôna ho an'ny fiaramanidina, sambo drone ary drones ho any amin'ny seranan-tserasera finday ho an'ny fepetra fanampiana voalohany amin'ny faritra voina. Ny fanandramana fahombiazana dia tanterahina taorian'ny fanombohan'ny fantsom-panafahana ny livestream crowdfunding.
04. Aprily - 30. April 2014 Oktobra 7th, 2015Oliver Bienkowski
18. Aprily 2013
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 18. Aprily 2013
Fitsapana Alfa momba ny fanodinana drones ao amin'ny Ivontoerana Fampirantiana Dusseldorf for Dokumi. Nandramanay ny kitapom-bary AVATAR misy fakan-tsarimihetsika sy toerana malalaka ho an'ny banky angovo azo ampiasaina amin'ny finday ho an'ny fiainana andavanandro ao Kriesengebieten. Ity drôna elektrika ity, dia hampiasaina amin'ny ho avy ao amin'ny Kriesgebieten avy amin'ny avatar PixelHELPER mba hanampiana ireo olona voakasika amin'ny alalan'ny serasera amin'ny serasera amin'ny Internet miaraka amin'ny tontolo ivelany.
18. Aprily 2013 Oktobra 7th, 2015Oliver Bienkowski
19. Desambra 2012
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 19. Desambra 2012
Mpanamboatra sy mpanorina ny PixelHELPER Oliver Bienkowski nanao fametrahana laser tao amin'ny Skyspace James Turrell ao amin'ny Light Art Center Unna. Nifandray tamin'ilay tilikambo niaraka tamin'ny tilikambon'ny fiangonana teo akaikiny izy. Ny sary sasany dia nalaina tamin'ny drone iray. Ireo drôna ireo dia manome fampiasana tsara ho toy ny tranonkala finday amin'ny finday izay manome ny fahafahana miditra amin'ny aterineto amin'ireo olona voakasika. Ny teknolojia momba ny masoandro dia amin'ny fampiasan'ny mpamonjy voina FPV azo ampiasaina avy amin'ny fikambanana tsy miankina sy kely ao amin'ny faritra lavitra izay mety ho voan'ny loza voajanahary amin'ny aterineto. Indrindra raha ny loza dia ny zavatra manan-danja indrindra ho an'ireo voakasika sy miankina amin'ny fametrahana fifandraisana. Vitsy ny olona any amin'ny firenena mandroso dia afaka mieritreritra androany tsy misy herinaratra sy Internet.
19. Desambra 2012 Oktobra 7th, 2015Oliver Bienkowski
09. Aprily 2012
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 9. Aprily 2012
Misedra ny fahitan'ny FPV (Fahitana ny olona voalohany) ny horonan-tsarin'ny lahatsary ao anaty sambo. Amin'ny antenim-pahefana mahery vaika dia azonao ampiharina ny fampisehoana lahatsary mba ahafahanao manidina amin'ny alàlan'ny drone avy any an-dalamby manerana an'i Luxembourg manontolo, araka ny efa nanaporofoan'i Raphael Pirker avy ao amin'ny TeamBlackSheep. Amin'ny hoavy dia te hampiasa tranonkala fifamoivoizana, aterineto ary fanampiana voalohany isika, ary natokana ho an'ny sehatra PixelHELPER an'ny sehatra mivantana amin'ny famoahana mivantana.
09. Aprily 2012 Oktobra 7th, 2015Oliver Bienkowski
01. Aprily 2012
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 1. Aprily 2012
Ny fiarandalambin'ny fiara dia mamely ny tobim-pamokarana nokleary OTAN any Neuss (Hombroich). Ho an'ny drôna madinika dia mbola misy ny drôna.
01. Aprily 2012 Oktobra 7th, 2015Oliver Bienkowski
Miaraka amin'ny flyer an'ny FPV amin'ny endriky elatra, dia mety ho tratran'ny fiaramanidina lava be ny fifandraisana amin'ny soleran'ny masoandro. Amin'ny loza dia mety hahatratra ny 30-70 kilometatra ny olona, ​​arakaraka ny famindrana ny onjam-peo amin'ny onjam-peo, miaraka amin'ireo elatra amam-borona ary manome azy ireo aterineto mandra-piverina indray.
07. March 2012 Oktobra 7th, 2015Oliver Bienkowski
29. Novambra 2011
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 29. Novambra 2011
Fanorenana ny Think Tank PixelHEPER eV any Neuss, Allemagne. Miorina amin'ity fototra ity, nanapa-kevitra ny hanomboka amin'ny PixelHELPER izahay. Tamin'io fotoana io, te-hampiasa ny Slumdog Tycoon izahay, lalao iray misy ny tena zava-misy izay nivadika ho sehatra fifanakalozam-barotra an-tsokosoko taorian'ny tabataba fisainana voalohany sy ny fampisehoana tsindrin-tsakafo.
29. Novambra 2011 Oktobra 7th, 2015Oliver Bienkowski